अर्थमन्त्री खतिवडाको घोषणा : अब कर बढ्दैन – Janata Times
अर्थमन्त्री खतिवडाको घोषणा : अब कर बढ्दैन
काठमाडौं, पुस २४ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अब कर नबढ्ने घोषणा गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार अब कर बढ्ने नभई कर उठाउने क्षेत्रको सुधार मात्रै हुनेछ । स्थानीय निकायले कर उठाएको विषयमा टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अरुसँग अनुदान लिएर स्थानीय निकाय स्वायत्त हुन नसक्ने बताउनु भयो । स्थानीय तहले पनि केही आम्दानीको स्रोत पहिल्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको सुझाव रहेको छ ।
समिटको अन्तिम सत्रमा ‘नेपाली अर्थतन्त्र ः आजको अवस्था र भोलिको दिशा’ शीर्षकमा नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेका चुनौती, वर्तमान सूचक र आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल भइरहेको छ । सो सत्रमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू रामशरण महत र प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा सहभागी हुनुहुन्छ ।
Related tags : अर्थमन्त्री खतिवडा#कर
सरकारले सुन्यो उद्योगी–ब्यवसायीका समस्या : विद्युत महसुल विवाद समाधान खोज्न बनायो उच्चस्तरीय समिति
यी हुन ओली सरकारका परिणाममुखी काम
वाह ! यस्तो रह्यो सागको भब्य उद्घाटन (फोटोफिचर)
कर्णालीगण्डकीप्रदेश १प्रदेश २मूख्य समाचारलुम्बिनीवागमतीसमाचारसमाजसुदुरपश्चिम
नेकपाले गर्यो बामदेव गौतम नेतृत्वको संगठन विभाग विस्तार, सातै प्रदेशका इञ्चार्ज थपिए
श्रममन्त्री बिष्टको अर्काे एक्शन : मलेशिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा लिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन